Bin Salmaan Oo Xabsiga Kasii Daayay Wasiirkii ilaalada Qaranka Sacuudiga.
Wednesday November 29, 2017 - 15:30:21 in Wararka by Super Admin
Xukuumada Aala-Sacuud ayaa Xabsiga ka sii deysay Hogaamiye ka mid ah mas'uuliyiin dhowr ah oo dhawaan ay xabsiga dhigtay xukuumadaasi ka dib markii laga qaaday lacag xoogan oo madaxfurasho ah.
Wararka ka imaanaya dalka Sacuudiga ayaa tilmaamaya in xabsiga laga sii daayey Mutcib bin Cabdalla oo ka mid ahaa tobanaan mas’uuliyiin ah oo dhawaan ay xabsiga dhigtay Xukuumada Aala-Sacuud ka dib markii uu bixiyey lacago madax furasho ah sida ay sheegeen warbaahinta xukuumada Aala-Sacuud.
Muctib Bin Cabdalla oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee Xukuumada Aala-Sacuud, islamarkaana ahaa waziirkii hore ee ilaalada qaranka ee Sacuudiga ayaa ka mid ahaa dhowr waziir oo dhawaan ay xabsiga dhigtay xukuumada Aala-Sacuud intii lagu gudajiray olole raaf ah oo xukuumada Aala-sacuud ay ku sheegtay mid qeyb ka ah la dagaalanka argigixisada.
Howlgalkan waxaa lagu xirxiray ugu yaraan 11 sarkaal oo madaxda ay dhaleen boqoradii soo maray nidamka Aala-Sacuud, Afar waziir iyo dhowr waziir oo hore kuwaas oo jeelka loo taxaabay ka dib markii la sheegay in lagu helay falalka ku saabsan musuq-maasuqa inkastoo ilaa iyo hadda aanan la heynin cadeymo muujinaya arimahaas, nidaamka aala-sacuudna lagu eedeynayo in uu raafkaas ka lahaa ujeedooyin siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale.
Dadka xamladan lagu xiray waxay intooda badan ahaayeen dad hantiileyaal ah oo ka mid ah dadka ugu dhaqaalaha badan wadanka, Waxaana dad badan ay rumeysan yihiin in tani ay tahay xamlo dhaqaale raadis ah oo xukuumada Aala-Sacuud ay kula wareegeyso dhaqaalaha dadkan.
Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganeysa mas’uul ka tirsan xukuumada Aal-Sacuud ayaa sheegay in Mutcab bin Cabdalla lala soo daayey ilaa saddex ruux oo kale kuwaas oo uu ku jiro nin lagu magacaabo Maxamed Ad-Dubeyshi oo ahaa Madaxii hore ee diinwaanka boqortooyada, Iyadoona sheegtay in dadkaas lagu sii daayey lacag madax furasho ah.
Mas’uulkan ayaa sheegay in xabsiga hadda laga soo daayey Muctab iyo saddex kale oo ka mid ahaa dadkii ugu cad-cadaa ee xabsiga la dhigay, Waxaana uu intaas sii raaciyey in qofkasta oo ka mid ah dadkaas lagu soo daayey lacag madax furasho ah oo gaareysa ilaa hal bilyan oo dollar.
Mutcab bin Cabdallah oo ka mid ahaa waziirada ugu cad-cad ee xukuumada Aala-Sacuud, sidoo kalena ahaa wiilka uu dhalay boqor cabdallahii hore ayaa hadda shaki badan la gelinayaa masiirka hankiisa siyaasadeed.
Waxaa lagu tilmaami jiray ninka lagu wado in uu dhaxlo maxamed Bin Salmaan laakiin sida muuqata waxaa hadda xidada u siibay Maxamed Bin Salmaan oo ku takrifalaya awoodda uu u gacan geliyey aabihiisa.
Sirdoonka Mareykanka Oo Xaqiijiyay in Max'med Bin Salmaan Uu Mas'uul Ka Ahaa Dilkii Wariye Khaashuqji.